သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောဆိုချက်ပေါ် နားလည်မှုလွဲမှာခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ~ YaWai (ပိုင်စိုးသူ)
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောဆိုချက်ပေါ် နားလည်မှုလွဲမှာခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း
Postado Monday, April 23, 2012 at 11:18 AM
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က လွှတ်တော်တွင် ကျမ်းသစ္စာကျမ်းဆိုသည့်စာသားကို ပြင်ရန် သူ့တွင် အစီအစဉ်မရှိဟု ပြောခဲ့သည်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ထိုသို့လုံးဝမဖြေခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတက်ရောက်ခဲ့သူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ထိုသို့ရေးသားခဲ့သော နိုင်ငံတကာ သတင်းအချို့မှာ နားလည်မှုလွဲမှာခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ယင်းကပြောသည်။
ထိုရှင်းလင်းပွဲတွင် သတင်းထောက်တစ်ဦးက "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လွှတ်တော်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အချို့သောကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ၀င်ရောက်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ဘယ်တော့ သူ့အနေနဲ့လွှတ်တော်ထဲကိုဝင်လာနိုင်မှာလဲ၊ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်နိုင်မှာလဲ"ဟုမေးမြန်းခဲ့ရာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွှတ်တော်ထဲကိုဝင်မလာတာ သူ့ရဲ့ သဘောဆန္ဒပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လွှတ်တော်ကြီးကတော့ သူ့ကိုကြိုဆိုနေပါတယ်"ဟုသာပြန်ဖြေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သူပေးပို့သော အသံဖိုင်အရ သိရသည်။ အမေးအဖြေများကို စကားပြန်မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းဖြစ်သည်။
Popular Myanmar News Journalမှ ဖြစ်သည်။
Anonymous on April 24, 2012 at 3:59 AM
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွှတ်တော်ထဲကိုဝင်မလာတာ သူ့ရဲ့ သဘောဆန္ဒပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လွှတ်တော်ကြီးကတော့ သူ့ကိုကြိုဆိုနေပါတယ်"ဟုသာပြန်ဖြေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်
It is 300% correct!! Who cares? What all citizens wishes is to see the improvements in all directions democratically for the benefits of all citizens and we care only the daily life first. She was not and is not do any good things but just the shouting politics and changing the words day by day!!Whatamess!!